‘ब’ पुराण – Sourya Online
केशवराज अर्याल (केरा) २०७५ कार्तिक १० गते ९:३७ मा प्रकाशित
वैशाख बाह्र गते बुधबार । बानेश्वरमा बस्ने बलबहादुर बराल, बालाजु बसपार्क छेउमा विश्व बोगटी, बमबहादुर बञ्जारा, विनीता बुर्लाकोटी, बिर्खबहादुर बान्तवा, बुद्धिबहादुर बस्याल र बलराम बुढाथोकीहरूसँगै बसेर बाजुरा, बझाङ र बाराका बाढीपीडितहरूलाई बाँड्न वस्त्र र बासको निम्ति बटुवासँग बाकसमा दान बटुल्न व्यस्त थियो ।
बलबहादुरको बस्तीगाउँ बझाङको बाजे बराजुको बस्तीमा चाहिँ ‘विस्ट बाजेको छोरो बलबहादुर बराल बायोलोजी विज्ञान विषयमा बिएसस्सी पढ्न बारी बेचेर बानेश्वरमा बस्या छ’ भन्दै बर्बराउँथे । बलबहादुरचाहिँ विज्ञान विषय पढ्न छोडेर बिहानै बालाजु बसपार्कछेउमा बसेर बाढी पीडितहरूका निम्ति बाकस बजाउँदै छ ।
‘बलबहादुर बालाजु बसपार्क छेउमा बसेर बटुका बजाउँदैछ’ भन्ने खबर बझाङ बाहुन बस्तीबाट विल्कुलै थाहा पाउनेबित्तिकै विरबहादुरका बाबु बिनोद बरालले बलबहादुरको बिहे गराइदिन, बलेलाई बोलाउन बलेकी बहिनी बिमलालाई बझाङबाट बालाजु पठाएछन् ।
बाह्रगते बेलुका बहिनी आएर बसेपछि, भोलिपल्ट बहिनीलाई बसबाट बालाजु बानेश्वर, बबरमहल, बल्खु, बढुानिलकण्ठ, बालुवाटार, बांगेमुढा, बानियाँटार, बोहराटार, बाफल, बिजुलीबजार, बाइसधारा, बसपार्क, बिशालनगर, बसुन्धारा, बाइपास, बिजेश्वरी, बागबजार आदि बीस बाइसवटा बस्ती टोल बसबाटै घुमाईदिएछ । बीसठाउँ घुमेपछि बिमलालाई बानेश्वरमा बलबहादुर दाइसँगै बसुँ बसुँ लागेछ ।
बेलुका बहिनीले बाले बिहे गर्न बोलाको भन्दै बाजुराकी बेहुलीबारे बेलीबिस्तार लाएर बताइदिई । बिहे गर्न बहिनीले बेहुलीबारे बताएपछि बलेको मनको वृन्दाबनमा बेहुलीराधा बास बसिहाली । बाटुली बाटुली, बदामी आँखा, बोली वचन विन्दास पाराको रे, बाफरे बाफ ! बलबहादुरले त बाह्रघण्टाभित्रै विचारेर बस बुकिङ गरी बिहिबार बिहान बाह्रबजे बसपार्कबाट बहिनी बिमलासँग बझाङतिर बसमा बुकुर्सी मा¥यो ।
बलबहादुर र बहिनी बिमला बराल बझाङ बाहुन बस्ती पुगेपछि बाआमा, बाजे बज्यै र बाबुनानीहरूलगायत बाह्र–तेह्रजना बेलुका विन्दास पाराले बसिबियाँलोमा बिताए । बाहुन बाजे बोलाएर बिहेको बेस्ट लगनबारे बातमार्दा बाहुन बाजेले वैशाखको बाइसगते बाह्र बाइस बजे बलबहादुरको बिहेको बेस्ट साइत भएकोबारे बताइदिएपछि बाहुनबाजे र बाआमा बाजे, बज्यैहरू बेग्लै बातमार्न बसे ।
वैशाख बीसगते बिहान बझाङवासीलाई बिहेमा बोलाउन बलहादुर बराल र बहिनी बिमला बाहुन बस्तीतिर बिहानै गए । बाहुनबस्ती नी के बाहुन बस्ती ? बाहुन बस्तीमा त बलामी, बराल, बस्नेत, बम्जन, बुढामगर, बोटे, बुढाथोकी, विष्ट, बञ्जरा, बस्ताकोटी, बस्याल, बुर्लाकोटी, बान्तवा, बि.सी., विश्वकर्मा, बाराकोटी, बनेपाली, वैद्य, बागचन, बेलवासे, बर्तौला, बञ्जाडे आदी बिस बाइसथरी बसोवास गर्थे ।
बाइसगते बलबहादुर बरालको बिहे बताए पछि बझाङवासी बस्ती नै बरियातको रूपमा बिहानदेखि बेहुलो हेर्न बाक्लियो बेहुलोघरतिर । बाहुन बस्तीको बिहे ! के अब ? बाख्राको बच्चा बच्चीझैँ बुरूक–बुरूक उफ्रिन्थे बाहुन बस्तीका वासिन्दाहरू ।
बेहुलो, बेहुलोको बाबु, बेहुलोको बाजे, बहिनी, बस्ती छिमेकीहरू र विशिष्ट व्यक्तिहरू बरियातकोरूपमा बाइसगते बिहान बसमा बसेर बाजा बजाउँदै बेहलुीको बस्ती बाजुराको बाँसबारीतिर बत्तीयो । बरियातहरूले बाजाको तालमा बसभित्रै बसीबियाँलो गरेर बिताए । बनको बाटोमा बस बेस्सी बत्तिरह्यो ।
बाँसबारीकी बेहुलीको बिहेघरमा बस रोकेपछि बेहुलीको बाबुले, बेहुलो बेहुलोको बुवा, बाजेलाई विशेषगरी बेञ्चमा बसाए । बरियातहरूलाईचाहिँ बकुल्लाबारीमा बसाए । बाजा बजिरहेकै थियो । बेहुलो, बेहुलीको विशेष प्रतिक्षामा बेञ्चमा बसेर बाहुन बाजेसँग विवाह बारे बातमार्दै थिए । बरियातहश्ररू बेहुलीका वैशालु बहिनीहरूसँग बाहसत्ताइसका बातहरू बताएर बाउँठिन थाले ।
बेहुलीपट्टिका वासिन्दाहरू र बरियातहरू बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिहे बन्धनमा बाँधिसकेकाहरू पनि बाजा बजेको वेलामा बाँदरझैँ बुरुक–बुरुक उफ्रिन्थे । बाजुराका बाहुन बाजेले बेहुलो बेहुलीको बाबु र बाजेलाई बेहुलीको बानी व्यहोरा, बोलिचाली, बाउआमा र बिहे बारे विस्तृतरूपमा बताउँदै थिए । बताउँदा बताउँदै बिहेको वेला बित्यो भन्दै, वरमालासँगै बोलाउनुलाई बेहुलकीकै बहिनीलाई बुइंगलमा पठाउँदा बेहुली त बुइंगलबाटै बेपत्ता ।
बेहुली बेपत्ताबारे बहिनीले बताएपछि बेहुलो बेहुलाको बाबु, बाजे, बाहुनबाजे, वरियातहरू, बेहुलीका बाबु र बाँसबारीका वासिन्दाहरू त बहुलाजस्तो बनेछन् । बाह्रकोष परबाट बसमा बनको बाटो आएको बेहुलोले बेहुली बेपत्ता भएसी बेहुलीका बाबुलाई बेहुलीबारे विन्ती बिसायो । बेहुलीका बहुलाजस्ता बाबुले बारीमा बनाएको बिहेभोजको बलेको अगुल्टो बाल्दै ल्याएर बेहुलोलाई बड्याङकी बड्याङ बजाइदिए ।
बेहुलीका बाबुले बेहुलोलाई बल्या अगुल्टोले बड्यांकी बड्याङ बजाइदिँदा बेहुलोको बुद्धि बंगारा नै बांगिएछ । बेहुलोको बुद्धिबंगारा नै बांगिएपछि वरियातहरू र बेहुलीका बाबुबीच बाझाबाझ भो । बरियातहरूले बेहुलीका बाबुलाई बाँसको भाटाले बजाइदिए बाँसघारीतिर बाह्र बल्ट्याङ खुवाइदिएछन् बुढा त बेहोस् । बाँसबारी बस्तीका बहुला वासिन्दाहरू बन्चरो, बेतलौरा र बाँसका भाटा बोकेर बरियातहरूसँग बाझ्न आए । बाजासाजा बन्द भो । विवाहमण्डपको बोहोता टपरीको विवाहभेटी नै बेपत्ता बनाइदिएछन् । विचरा ! बाहुनबाजेको नि बेहाल भो ।
बाझ्दा बाझ्दै बिचबाटै बेहुलो त बिहे घर छोडेर बरमाला नै बेरेर, बेहुलोकै पोसाकमा बझाङबाट बाजुरा, बैरेनी हुँदै बालाजुतिर बहुलाझै बेतोडसँग बुर्कुसी मारेछ । बर्बादै बनाएछन नि बझाङ र बाजुरामा त । विश्वकै बिजोग र बेइज्जती बिहे बझाङ र बाजुरामा बनाएछन् बाई..। बहुला बरियातहरू बारम्बार यताउता, कहिले बेहुली बेपत्ता कहिले बेहुलो बेपत्ता ।